]GỊ KA ANYỊ | Ụlọ ọrụ Shangrui
]Shangrui Machinery Co., Ltd dị na Shunde, Guangdong Province
Shangrui bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na-ejikọta imewe, mmepe, mmepụta, nrụnye, ire ere, ire na mgbe ọ na-ere ahịa. Na elu-edu otu elite, magburu onwe mmepụta ngwá na ule ngwá. Nyochaa ngwaahịa, usoro njikwa mma na-emeziwanye nke ọma.
]ọkachamara n'ichepụta ụdị osisi dị iche iche na ngwá ọrụ mmepụta osisi siri ike, dị ka mkpa dị iche iche nke ndị ahịa na-emepụta na ịmepụta ígwè ọrụ na-abụghị ọkọlọtọ.
]Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji mejuo ndị ahịa anyị nke ọma dị elu na nke a pụrụ ịdabere na ya iji hụ na ndị ahịa ọ bụla nwere ike inwe ahụ iru ala na obi ike na ngwongwo anyị na ngwa ha. Ngwaahịa anyị na-achọta ngwa ngwa ha site na ahịa n'ihi ihe mara mma. Ha nwere ọtụtụ atụmatụ na-akwado mgbasa ozi na ngwa.
]Ọ BỤRỤ na Ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, detara anyị akwụkwọ ozi